Firmino Iyo Mane Oo Laba Isleeg Ka Dhigay Leicester City-dii Horyaalka Haysatay
HomeWararka MaantaFirmino Iyo Mane Oo Laba Isleeg Ka Dhigay Leicester City-dii Horyaalka Haysatay
10/09/2016 Abdiwahab Ahmed
Kooxda Liverpool ayaa si fudud laba cad oo isleeg uga dhigtay naadiga haysta horyaalnimada Ingiriiska Premier League ee Leicester ciyaartoodii koobaad ee ay garoonkooda ku yeeshaan xili ciyaareedkan.
Liverpool waxay hogaaminta ciyaarta la wareegtay markii Roberto Firmino ka faa’iideeyey kubbadii uu u soo dhigay James Milner, kii labaadna uu cidhibta ugu dhigay Daniel Sturridge xidigii kulanka Sadio Mane.
Laakiin Leicester ayaa rajo heshay iyaduna markii Lucas si aan la malayn Karin kubbad ugu dhiibay Jamie Vardy kaas oo isna shabaqa oo madhan ka dhex dusin gaadhay shuut kulul.
Si kastaba ha ahaatee, Adam Lallana ayaa si layaab leh, kubbad uu ka qabsaday goolkooda meel u dhaw u tuuryeeyey Mane, oo isna intuu goolwadaha la dhaafay u gacan galiyey si faxalnimo sare ah, Firmino kaas oo ku labaystay.
Jurgen Klopp kooxdiisa dharka cas lihi, todoba dhibcood ayay ka heleen afartii ciyaarood ee ay yeesheen, kuwaas oo ay saddex kamid ah banaanka ku yeesheen maadaama dhisme iyo balaadhini ku socoto geggidooda Anfield.
Dhinaca kale, kooxda Leicester ayaa ku negaatay afar dhibcood, xili ay isku diyaarinayaan kulanka Champions League ay ku wajahayaan Club Brugge Arbacada.
All Goals & Highlights: Manchester United vs Burton Albion
Pogba wuxuu noqon doonaa xidigii ugu fiicnaa dunida abid :- Zidane